O G A Y S I I S * H I I L Q A R A N: Munaasibad Ka Dhici Doonta Ottawa 23 June (Up-dated 08/06/12) « HiilDan.Com
Home › Ogaysiis › O G A Y S I I S * H I I L Q A R A N: Munaasibad Ka Dhici Doonta Ottawa 23 June (Up-dated 08/06/12)
O G A Y S I I S * H I I L Q A R A N: Munaasibad Ka Dhici Doonta Ottawa 23 June (Up-dated 08/06/12) By hiildan on June 5, 2012	• ( 32 )
Ururka siyaasiga ah ee Hiil Qaran ayaa xaflad weyn ku qaban doona magaalada Ottawa ee caasimada Canada. Munaasabadaas oo dhaci doonta bishan Juun 23 keeda, waxaa ka soo qaybgalaya Madaxda sar-sare ee Hiil Qaran gaar ahaan Professor Axmad Ismaciil Samatar oo ururku u igmadey inuu uga qayb galo tartarka jagada Madaxweynaha Dalka Somalia.
Ururka Hiil Qaran iyo hogaankooda siyaasadeed Dr Samatar waxay ummada soomaaliyeed ugu baaqayaan Siyaasad cusub, hogaan cusub iyo himilooyin fog oo ay ku dheehantahay Islaanimo iyo Soomalinimo, si ay u soo noolaado qoomiyadii iyo qaranimadii Soomaliyeed.
Ururka siyaasiga ah ee Hiil Qaran ayaa xaflad weyn ku qaban doona magaalada Ottawa ee caasimada Canada. Munaasabadaas oo qabsoomi doonta bishan Juun 23 keeda oo ah sabti, min 3-da galabnimo (3:00 PM) illaa 6-da (6:00 PM) waxay ka dhici doontaa 250 Somerset Street East.
Waxaa ka soo qaybgalaya Madaxda sar-sare ee Hiil Qaran gaar ahaan Professor Axmad Ismaciil Samatar oo ururku u igmadey inuu uga qayb galo tartarka jagada Madaxweynaha Dalka Somalia. Ha moogaan inaad dhagaysato Professor Samatar oo Ottawa la hadli doono isagoo ah musharaxa xisbiga Hiil Qaran.
Hadaba si aad uga bogato munaasabadaa iyo qaban-qaabadeeda, guji ama lingaxyada ogaysiiska ka dhex muuqda ama la xidhiidh Jaamac 1.613.600.7332 ama Xasan 1.819.319.0447.
U hiili Hiil Qaran!
Halkan riix (download the PDF the full sized full featured poster)
*** Ogaysiis ***
Waa halkee 250 Somerset east?
Share this:ShareFacebookTwitterGoogle +1PrintEmailLinkedInLike this:Like Loading...« Madaxweyne Geelle Oo Qaabilay Madaxweyne Saylici Iyo Waftigiisa..The Queen’s Diamond Jubilee »Categories: Ogaysiis	Related Articles
Jaaliyada Soomaaliyeed Ee Ku Nool Dalka Ingiriiska Oo Lagu Wargelinayo In Ay Ka Soo Qeyb Galaan Baroordiiq Loo Sameynayo Dr. Cumar Cismaan Raabi.	Ogeysiis: Gobnimada Gadabuursi Iyo Gegida Heathrow Iyo Soo Dhawaynta Madaxweyne Saylici..	Ogaysiis Jaaliyada Gobolada Awdal Salal Gabiley ee ku dhaqan dalka Sweden.	Ogaysiis: Reer Boonoow Iskaa Wax U Qabso Wararka Noogu Soo Dira	Ogeysiis Ogeysiis: Appeal Project	Ogeysiis: Golaha Hoggaanka Tolka (TOL Leadership Council (TLC)) wuxu qabandoonaa Shirka Wadatashiga Tolka Gadabursi:	32 replies	»
Marunbaa	June 5, 2012 • 12:00	Odaygii wax uu sidii hindida daaha dabadiisa ka soo heesaba ma isa soo bandhigay? Wuxu i xasuusiyey hees tii Xasan Cilmi, Nimco Jaamac u suluulixiyey ee ahayd.
Ka quusoo ha quudarayn
hadaad igu qoonsatana
dibaad uga qoomamayn.
Somali hadii ay food qaado maanta shiki kuma jiro in odaygani faryaro bidix ku qaadan lahaa balse Somaliya maanta waa gabadh dariiqa istaagtay oo kale gabadh dibad baxdayna saaqib baa u taliya iyo tuug indhaha soo xidhay. Markaa somaliya rag baa maal iyo muruqba gashaday waxayna u eegtahay in shaqsi somalimo ku jirtaa albaabta madax tooyada dhaafi doonin. Ani waxay ila tahay, naf baxday waa laga samraaye, Samataroow quus qaad bal inta wax kale soo baxayaan. Uma malaynayo askari kun dolar qaataa in uu 50 dolar ku iimaan qabi doono somaliyana waxay noqotay wadan lagu tijaabiyey nidaam kii loola baxay Satelite state. Marlay ka sacab u tuma ma ihi balse balse hadii meesha dhuumasho siyaasadeen odaygu ku galo waxan leeyahay hanbalyo hordhaca iga gudoon.
Reply ↓	Hersi	June 8, 2012 • 17:46	ASC,
Jaahilow digtoonow, xaasidow dhagaha fur!
Hogaankii Somalia waxaa guntiga u soo gaabsaday aqoonyahankii soomali ugu weynaa, geesigii akhlaaq iyo garaad Ilaahay siistay oo ah Professor Axmad Ismaciil Samatar. Ummadi markay baaba’do, Ilaahay wuxuu ku badbaadiyaa aqoonyahanadeeda oo Hogaanka haleela. Maanta Somalia dhibtii waa u dhamaatay, wadadii mustaqbalkana waxaa ku ridi doona Halyaga hadh iyo habeen dalkiisa u dooda oo ah Smatar. Professorku maaha shaqsi siyaasada u soo galay hanti, magac amba dano gaara. AqoonIlaahay wuu siisay, cilmi halkii ugu saraysay ayuu ka gaadhay sida Dean Jamacadeed. Malaha ma garanaysaane, markuu professorku muddo bare ahaa, wuxuu noqday dabadeed cilmi-dhaliye. Macadka uu Dean-ka ka yahay isagaa sameeyay oo soo dajiyay cilmiga uu jaamacada ka dhigo ee maaha professor loo dhiibo aqoon dad kale dajiyeen. Halkaa wax gaadhayna oo soomali ah kalidiibaa la hayaa. Waar haddaad kaa isku aaminiwaydeen ma mooryaanta SNM ayaa mustaqbal ka sugaysiin. Maanta xaqii waqooyiga ninka qudha ee keeni karaa ee cadaalad ku soo dabaali kara Somalia waa Professorka ee diyaargarooba.
Ilaahay ha la jiro aqoonyahanka , Ilaahay ha soo celiyo midnimadii iyo karaamadii soomaliyeed. Yes, we stand with Professor Samatar and HIIL QARAN.
Reply ↓	Jicimbir	June 5, 2012 • 12:09	Marunba sxb duqa manata seftisa bananka aya tala waxana laga yabaa inay u marto wayo ciyaraha muqdisho wax badan ayu ka yaqana wanan nin yaqana tabaha rexamarka xaga shiribka wana u qalmaa inuu somali hogamiyo markaa hambalyo hada ka hor ayuu xamar nogu yimid axmad ismaciil waa nin karti iyo aqoon ilahay siiyo maha inan xaasidno ninkan hadu ilahay haybadan siiyay marka inta wanaga somalida jecel waxaan doranayna xamarna ku soo dhawaynaynaa
Reply ↓	kuluc	June 5, 2012 • 12:56	profesorka ma heshiiskii jaamacadaa ka dhamaady sida cali khaliif oo waa hawl gab, muxu ku falayaa fuulista baybayga iyo kaaraha qaabka daran ee burundi, shariif afguduud miyeydaan arag oo ilaa jilbaha inta bullet proof loo geliyey koofiyad bira iyo kabo qadhana illan oo kaare aad booyad moodo dabada kasii huluulanaya kkkkkkk, xitaa kalsooni kuma qabo in ciidan soomaaliyeed amaankiisa sugaan dalkaba burundi iyo ugandhaa xukunta jinna kasaari maayo alshabaab inay dhamaato yagu maba rabaan waaba waxay ka baayac mushtareeyaan xagay u laayaan, alshabaab iyo burcad badeeduba waxay noqdeen risiq malaayiin kale ka faa,iido.
askarta ugandha mushahar 100 jeer ka badan kan somalida yey ku qaataan meesha way awoodaan inay alshabaab bil gudaheed kusoo afjaraan laaakiin yagaan rabin miyaad aragteen yagoo adeegsanaya helicopters iyo diyaarado dagaal ? yagaan rabin waayo filinkaa markiiba soo afjarmaya,
ciidamada africanku faa,iiday ku qabaan dagaalka somalia.
dadka somalida ah ee qurbaha soo gala qudhooda ayaa faa,iido ku qaba jiritaanka alshabaab oo sharci iyo degenaansho ku hela alshabaabaa ayeyday dishay ana lug iga xidhay, sanadkiiba kumanaan somali ah ayaa sharciyo kala duwan ku hela sheegasho been u badan oo sheeganayaan in alshabaab waxyeelo u gaysatay. dada alshaab ku hoos nool waabay adagtahay inay ilaa yurub u lugeeyaan kkkkkkkk.
burcad badeedu yaduna waxay noqotay ganacsi ay ku mushahar qaataan kumanaan askari, ciidamada badaha ee wadamada aduunka ugu tunka weyn oo dhan ayaa xeebta somalida beer iskaga cabayaa mushahar fiicana ku qaata, maamul goboleedka puntland, jasiirada seychales, somaliland iyo jabuuti ayaa yaguna dhaqaale fiican ku hela kobcinta burcad badeeda (la dagaalan wax la yidhaa ma jirto) .
Reply ↓	gudoon	June 5, 2012 • 14:54	kuluc,, xasiid baa tahay idoor ah kula yaabi mayno,waxa diintena ina faraysaa waxad naftada la jeceshay walaalkana la jecloow idinka idoor idinka kaliya baa wanaag isla jecel qofkastoo wanaagsan waad ka naxdiin waxa la yidhi xaasid ma aflaxo waa waxa halkaa idin dhigay 22yearss aad maanta khayrkiin ka hadhen la idin bahdilay aad khatumo oo dhowr bilood jirta la idin agfadhiisiyey aad kalmada awdalstate ka naxaysiin aad mara kasta oo color blue ah ka naxaysiin markaa,ina samater waa profersar aan u baahnayn inuu dan uu leeyahay dabka muqdisho iskugu tuuro dantiisa wuxu ka door bidayaa danta umada somaliyed big picture buu arkayaa wuxu isku dayaya bal inuu wax ka qabto umadan la kari laayahy in wax loo dhiso walaalka oo qurux badan oo nabada waa lagu faana xataa wadamada muslinka ah ka wanaagsan ee horu mar samyey baa lagu fanaa adna walaalka oo somali ah baad dhibtiisa ku faraxsan tahay waxan hadlkayga ku soo gaabinaya ina samater guul ban u rajaynaya ilaahay hala qabto inu somalia badbadiyo sharaf bay noo tahay hadan samaroon nahay haduu ku guulaysto inu somalia nabad ka dhigo i hope him all best cadowgiisa ha jabo,,,god bless awdalstate of somalia
Reply ↓	Mustafa Asxaabi.	June 5, 2012 • 16:43	Prof Samater waa halyey soomliyeed oo maanta loo baahanyahay waanan soo dhawaynana waanan ugu ducaynanaa inuu ilaahay xilkaa u fududadiyo
Hiiiiiiiiil Qaran Guuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuul iyo Gobonimo.
Reply ↓	Marunbaa	June 5, 2012 • 19:26	kuluc habaar ha inoo soo jiidin. Waxad kaga baxdaa oo kaliya, Alaw wala wayn wareerka saar anakana wanaag iyo barako noogu dar nabadayada. sidaad sheegtay waa qandaraas aan dhamaad lahayn somali intii ugu liida tayna meela hii looga baah naa baa la dhigay geesi iyo nin garasho dheerna lama rabo in salaanka somaliyeed dib uu usoo koro markaa anigu mida kaliya een Samatar rajo maleh leeyahay waataa maadama oo uu yahay nin cilmi, caqli iyo aqoonba isku darsaday waliba ay u dheer tahay somalidii wixii lixdan kii ka horeeyey oo uu aamin sanyahay. bal aan sugno horaan u sheegoon idhi, bilee duqani somali hogaanka u qabay inta hareeraha la eegayo.
Reply ↓	DarbiSamaroon	June 5, 2012 • 20:35	Iga walee kan malagiisii ayaa galay balaayo kac guur bay ku tidhaa ama kac guurso waar meesha Majeerteen oo ah aabaha fawdada iyo qalalaasaha ayaa loo diiday oo Sxvkay cabdilahi yuusuf ayaa looga dhaartay inuu ku raago isagoo haysta ciidan badan oo Ethiopia ah waaba miskiin aan cidina Xamar kaga horeyn walee wuu riyoonayaa Somaliland guul.
Reply ↓	mustafe	June 5, 2012 • 20:40	Hiildan iyo Hiil-Qaran maxaa magaca ka dhaxeysiiyey. Waxan qabaa in ninkani yahey nin afsoomaali fiican, aaminsan in Somaaliya waxnoqoto intaas waxa udheer waa ninka kaliya een laheyn go’aan guur-guurka.Prof.Samater waa halyey Soomaaliyeed unaqalma madaxtinimada Soomaaliya. Waxan daawadey wareysi Somalichannal kaga qaadey Kenya markaa hadii hadaladiisa iyo calooshiisu is waafaqsan yihiin wuu ku guuleyan Madaxweynaha Soomaaliya.
Laakiin Su’aasha aanweydiin lahaa waxey noqon laheyn Prof Samater dhiskii ururkii la odhan jirey ARDAA ee lahaa 2 sandoodbaan ku dhisi doonaa dekeda Lughaya xagee ku danbeeyey? Waxan jeclahey inuu xubin ka ahaa mase hubo inuu aas aasaha ARDAA ka nid ahaa. Iskusoo wada duuboo waxan laanahey soo dhadhawow Prof. samater iyo inta kale ee jecel midnimada Soomaaliyeed hadase waxa na horyaala hirgalinta Awdalstate. OOdi Qaadin iyo Jiidid waa isla guri gayn Awdalstate iyo hiilqarana waxey usocdaan isla meel kaliya. Dabaase jira wixii ay ka arki waayaan SNM xaasidnimo uun la soo juurara waar wuxu maxey ahaayeen.
Reply ↓	Xunshalay	June 5, 2012 • 21:28	Xisbiga hiil qaran ma hanan kara talada ?
Reply ↓	GEEL QAAD	June 5, 2012 • 22:02	GADOON SOMALI LAND AAMIN WAAD KUQASBANTAHAY ilahay kasokow meel aad ugabaxdana majirto aamin sland iskadaa xinka qabiil nacaybka IYO XUMAANTA AAD WALALHAA UHAYSID anagu waanu ilowna waxka stoo somali noogaysatay hawraacin reedkaga dib gabadh batahay walashay oo kaleh isdaji jooji colada sokeeye ee aad wadid reer kaxoogwayni majiro reerka samaroon habahdin WAA TALO
Reply ↓	GEEL QAAD	June 5, 2012 • 22:07	SAMATAR LOW MAXA UU ilowsanayahay somaliyadan uu ku ordaayo in aan sland laxoreeyay hadeerna marlabaad haday kafursanwaydo loo daadin doono dhiig farabadan yaayidhahad jooji karaha reer xamar ku soo sari doonan shiidalkakadhamaan kolay diyaarbaan uhay in aan shikhsiyan aandifaaco sharfta shacbaka sland shiigna ushubo
Reply ↓	Aisha	June 5, 2012 • 22:50	umalaynmaayo inuu reer awdal wax usoo kordhin waayo wuuba kafaanaa laakiin wadanka soomaliya wuu hagaagi hadii nin samaroona loodhiibo sidaacadana wuu uhogaamin aslkaba gadabuursigu waa istus dadkakalay wax utaraan iyaguna way is xaasidaan
Reply ↓	godan	June 5, 2012 • 23:17	Waxan xasuusta habeen laga waraysanayay Somali tv oo markii la yidhi reer awdal ayad tahay u la soo booday maye rer Gabilay ayan ahay,sidi waxu ka faanayo kale,waxanse u malayn anigu markan Gadabursiga u fiirsaday siday yihiin u ka quustay arkayna inayan dad jira ahayn oo addunka la jaanqaadi kara,waliba hiilna ka waayay ayna dhabarka ka toogteen wayse istaahilaan wax laga faano yihiin waan taageersanay profosorka iska dhiibay ilyarta.
Reply ↓	gudoon	June 6, 2012 • 00:24	geel qaad… aniga waan ku sheegay in aana aqoon wax somaliland loogu yeedho ama la baxay somaliland macnaha aan u aqaano waa dhulkii somaliyed qoladinan isaaq ayaa dhaxal idin siiyey somaliland ma agoontii ingriis uga dhintay ama uga tagay baad ahaydee ma ogtihiin in dhulkaan jiray ingriiska ka hor in markuu soo dagay wadankan somalia ahaa la dagana ma ogtihiin in gadabuursi ahaa qoloda heshiska la gashay ingriis warkhadii heshiiska lagu saxeexay waxay maanta ku jirtaa webka subulaha la yiraahdo soo akhri soo laabo aniga ha igu odhan waad ku khasban tahay somaliland aan aniga u aqaano waqooyi somaia waan dagaa anaa leh adna kaagama tagaayo waxana naga goan in aan somaliwayn ahaano wax la qaybsano maxaa anoo helaaya somali waqooyi iyo koonfur oo xora laba gobol igu xidhxidhaaya,,markaa anoo gabadha baan ku karbashi waliba ee dhulkana anaa leh ,, hadad dhiig daadiso iyo hadii kalaba idoor uun baa dhamaan cid kale ood wax yeelaysiin baa iska yar dagaalkii aad soo qaadeen 1988 dhibta inta ugu badan idoor bay gaadhay in ugu badan ee dhimaay idoor bay aheed maxaa xigay in aad walwal ku nolatiin iyo riyo iyo ictriaaf aad aduunka ka baridiin islaan adna la yiraahdo oo ooyaysana waan arkaayey ee lagu yidhi eedo somalia waa mid caaruurti idoor ee dhimatay ilahay ha u naxariisto aduunka civil war wuu ka dhacaa lagumana kala go ee xamar iska soo xaadiriya markaa sida ula soco good bye and god bless awdalstate of somalia
Reply ↓	hiildan	June 6, 2012 • 08:12	Mustafe,
Magaca HiilDan ayay soo arkeen markaasay iga dheegteen ayaan filayaa, oo ay u bixiyeen HiilQaran. Ama Waa isla doonasho Ilaah.
Dee anuu miskiin Danyar oo tol yar baan ahoo, waxyaabo badan oo an qoray ayaa imika la bililiqaystaa, xitaa riwaayadda Bixiso, maalinba qayb yar ayaa laga soo jabsadaa. Cid tidhaadha waar ninkaasbaa lehe ka daaya iyadna ma jirto, oo DanYare waa TolYare..kkkkkkkkkkkkkk
Reply ↓	Isaq Boy	June 6, 2012 • 10:42	Prof Samatar hala daayo.. abtaanu u nee kkk
nasiibkiisuu ka qaadiiye ha iska dhex boodo siyaasadda maqluubka u rogan iyo yayda isku cunaysa Xamar iyo Kursiga falan ee Vila Soomaaliya dhex yaala..
Wuxuu doono ha ahaadee haduu ninku han leeyahay dhowrka cishuu ifka joogo.. waa nin jira..
Reply ↓	Marunbaa	June 6, 2012 • 10:43	Godan, xaqiraada maxaad u taqaan? ma marka aad waxaad tahay ku faanto mise marka waxaanad ahayn lagugu shaabadeeyo. Waxan hubaa ma samaroon baa tahay hadii la yidhaa inuu haa odhan lahaa balse ma reer awdal baa tahay jawaab teedu waa maya sobob too ah Awdal asal iyo raad midna kuma leh. La soco meesha aad la rabto inuu tago iyo halka uu ka hadlayaa waykala durug san yihiin. Waraysiga waan arkay su’aashana ujeedaa ka danbaysay ninkuna aqoonta ka sokow wuxuu ka soo jeedaa deegaanka gabiley oo af iyo ataarba isku darsaday.
Reply ↓	Galbeedi	June 6, 2012 • 11:47	marunbaa
sxb aad baad u mahad san tahay waxan godan ex ismoog odhan lahaaba adaa iga hor idhi
Samaroon laba mid kala daaya beelaha daga adwal salal iyo gabilay oo aad meel walba ka tidhaahdaan beentiina maaha ee waa runtiina oo anaaba runbaad sheegteen leh lkn mid samaroon ah oo reer gabilay ahi haduu wax yara noqdo ama wax yar barto sida ilma samatar oo kale oo u idhaahdo reer gabilay baan ahay naxdintaa aad wada qaracmaysaan ee aad la soo boodaysaan samaroonimada ayuu ka faanayaa sawka hada ku daba daray dadka awdal dagana abtirsiin baan wadaagnaa mise waxad rabtaan in deegankan gabilay aad faruqisaan oo aad reer nuur dhabarka ka martaan taasna waa mid gaar ah
Reply ↓	GEEL QAAD	June 6, 2012 • 12:32	SHEEGASHAD GABILAY IYO SALAC ISKADAAY smaroonow mide mise sida dhulbahanta sool sanaag cayn ayaad doonaysaan dadbaa dhulkan idinlagan khayrkiin wax laqabsada xa qirada aad dhulka la maraysaan jooji
Reply ↓	GEEL QAAD	June 6, 2012 • 12:37	gadoon iska riyood SOMALIWAYN kolay reer awdal waa reer balaadhan waxan jecelahay in aadtahay reer itopiya marka aan dhadhan saday hadaldada awdalste wax tageeraa waa reer itobia iyo dad arimo kaleh oo aan sland ka soo horjeedin walahay gurigan aan daganahay wayladagan yihii dhaliyaro badan mana aamin sana waxaad aad ka amin santahay sland ee ad dhulkaga aad uga cararaysid dadkale gadoon guul baan ku ra jaynayaa iyo slnad
Reply ↓	HaniMuufo	June 6, 2012 • 13:22	Hiildan,
Si aad oo wayn aan u qoslay kawaran. Waa run anuuba waan is iri Hiilqaran iyo Hiildan maxa iska galay?. Laakin ruwaayada bixiso waa ka xumahay in lagaa bililiqeestay. Aduu in aad fikradaha qaliga ah ee musalsalka noqon karo aadanba debada soo dhigin ayeey ahayd oo aad suuq iiba u raadiso. Si laguugu karaameeyo fikradahaga muhiimka ah. Hadaad iska qorto waxa kuwaa xadayo waa dhib aduunka dhan yaala. Anuuba Dowlada dhalin habaabis anaa u baxshay xukumada Somaliland hadana hadalkaygi orodkuu qaaday dhan kastuu u carari cid soo aliftayna lama oga kkkkkkkkkkk. Iska samir bro Somalia murti ha sheegine hantideedi ayaa dayacan iyo dadkeedi!.
Reply ↓	hiildan	June 6, 2012 • 13:38	Hi Hani
Waayahay, Waan iska samri, si kale ma leh… I am a very patient man…
Reply ↓	mustafe	June 6, 2012 • 20:53	GeelqaadGabiley 1980s laba xaafadoodbey aheyd midna J.Abor midna baaha Samaroon degaan. Hadii R.Itobiya iyo R.Jabouti taageeraan Awdalstate maxaa ku jaban sowtan beelaha Isaaq sida Awalta Jabouti, Gadhxajiska Daroorba taageereen SNM state. Xafladaha Qubahana waa sida maalinta SNM/ 18 May kuwa wadaa waa iyaga. Ciisuhuna xitaa la yaab markey arkeen in isaaqii jabouti kaga mashquuleen SNM state koogiina dayaceen sababtuna tahey isirnimo. Qaarkood waligood matagin Woqooyiga Soomaaliya. Waa la fahmey Soomaalidu iney noqotey let my clan live but let other Somali clans evaporate. Anigu waxan ku dhashey Borama waxan taageerey Awdalstate kamana lihi ninka Samaroon ee Djabouti ilaa Awbarre. Waxa kaliya eenka codsanayaa waa iney degaanadoodana hormariyaan taageeraana Awdalstate.Hadii Hiilqaran guulo usoo hoydaan hiildan websidena wuxu helayaa xayeysiis aan cidina u ogoyn. Sabata oo ah hadii la yiraa ka baadha baadi goobyada netka ee waxlagu baadho waxa soo bixi hiildan, hiil qaran inkastoow jiro hiildan sadexaad.
Dadka maxaa ka si ah malaha Samaroonka Borama sheegan waayaa maaha Samaroon. Mar hadii dhulkii ilaahey lahaa xitaa Soomaalidu isku qab-qabsaneyso waa iska caadi in fikirada, heesaha iyo murtida kaleba la iska wada isticmaalo. Dadkan leh profku wuu ka faanaa Samaroonka anigu ma fahmin waayo marka uu leeyahey waxan ahey reer Gabiley micnuhu maaha diidmo ee wuxu sheegey in Samaroonku meesheyku dhashaan iyo degaankey soo jeedeen sheegtaan. Ninka Samaroon ee Soomaaliya hagaajinayaa waa nin Samaroonka wanaajinaaya.
Reply ↓	Marunbaa	June 6, 2012 • 21:17	Let my clan live but the other Somali clan evaporate. Mustafe midaas aad baan kuugu raacay oo waxad i xasuusisay Tuuga somaliland ka baxsaday ee Buubaa la yidhaa oo leh, anuu danta reerkaygaan u joogaa hada waa isagoo masuul sare ka dawlada somaliya. Balse odaygan bidaarta leh ee Samatar waxan u aqaan sidaan qoyskayga u aqaan si lamida mana aho nin qabiil iyo reer qalbigiisa ku jiraan intaan saadaalin karo waana shaqsiyaadka tirada yar ee somali ku jira waanan hubaa in aanu odhanayn let my clan live as the other one evaporates balse markaad Mustafoow leedahay Riyo state baan taageeraa hadana somaroon baan jeclahay in ay dantooda gaadhaan mid keed wareer san tahay? Dhaawaca Riyo State reer kan ka kala dhax riday waa mid aan dhayal ku bogsan doonin dhibtana idinkaa iska leh sobob too ah kuwa ka soo horjeedaa xaqbay u leeyahiin diidmada markaad waar aan wax isla eegno u joogsan waydeen.
Reply ↓	GEEL QAAD	June 8, 2012 • 16:29	anigu waxan kayabay kan MUSTAFE ,, XAMAR AAD HADAADOONO,, LAAKIIN AANIGA ….XASUUQII MAANILAAWIN ,XASUUSTII IGAMAGUURIN ,XADKII LABADOWLADOODIYO XADUUDBAANOO DHAXAYSA , NIIN KII XIISAYNAYOOW ORODOO ADIGU AAD ,, waayo dhayal kuma iman sland dhayla xamarku tagimayso NINKII KARE XAMAR KASOO FUULAYAA ISAGAY UTAAL ANIGA DHULKAYGU WAA sland sland anigaa iskale anigaa udhintay una dhamandoon SNM WAKHTIGEEDII WAA LA SOO DHAFAY HADA SLAND JIRITAANKEEDA AYAAN ILAALIN INTAAN NOOLAHAY
Reply ↓	DarbiSamaroon	June 8, 2012 • 17:32	Mustafe…..Sxb anuu reer Borama ma ihi mana sheegto waan ka faanaa waayo reer Borama waxaan u aqaan dad la mid ah (Shaanshida) waayo waxaad ku garanaysaa dadka la yidhaa Reer Borama iyo Reerka koonfur degan ee Shaanshida waa isku mid waxaana ka dhaxeeya dhaqano badana way iska shabahaan,dhaqanaadaasi waxaa ka mid ah xanta,xasadka,fulaynimada,xaqiraada,ismasaxaada,burush iyo ranji abu saliid ah oo aan go’ayn waligii ayay isla daba socdaan tabta shaanshiduna waa sidaa oo maanta hadaad nin shaashi ah ka qaadato naagtiisa wuu ku daawan lkn xanta iyo xasadka way ku dheereeyaan hoosna way u hadlaan kor uma qaadaan codkooda markaa anuu waa nacaa meesha la yidhaa Borama iyo waxa degan ba anuu reer Burdi ayaan ahay waanan ku faanaa xataa reer Dila in aan sheegto wan ka faanaa aqoonsigayga dhan waxaa iigu qoran Burdi ka helimaysid Borama iyo dhulka shaanshida.
Reply ↓	hiildan	June 8, 2012 • 18:26	Axmad Ismaaciil Samatar, waa Axmad Guray
Reply ↓	hiildan	June 8, 2012 • 18:28	Reply ↓	godan	June 8, 2012 • 22:13	Marunba iyo Galbeedi salaan sare,ma ogtihiin inaan dad isugu dhownay sadexdeenu?Gabilay waa xaruntii awowgay Ugaas cali Makayldheere,waa meeshii lagu asaasay boqortooyadii reerkayaga,laguna dajiyay xeerkii Gadabursiga waa xudun Samaroon,waa qudbigii awowga aan ka soo tafiirmay waqtigaad dhulka timaaden shalay ayay ahayd halkanse ka sheegi maayo,mase ogtiin inaan Dalalka iyo Yooniskaba galo kkkkk,talaabo kastaan dagnay,ka talinay taariikho cad cadna kaga tagnay dhuklka Samaroon ha isku kay soo jeedinina karbaashkayga lagama kaco e kkkkkkkkkkk.
Reply ↓	Geesi Makahil	June 9, 2012 • 09:52	Axmed wuxu ka mid yahay Raga Adunka ugu horeeya ee wax laga waydiiyo sida uu noqon doono Mustaqbalka Siyaasadeed ee ku waajahan Wadan:Dhaqan iyo dhaqaale..
Sanadkastaa markuu Biloowyahay,waxa axmed laga waraystaa sida uu noqondoono sanadkan bilaabmay.
Dadka noocaas Axmed ah Aduunka waa laga ciseeyaa.
Haday ummada Somaliyeed Nasiib u hesho in uu Axmed madaxwayne u noqda,way ka bixidoonaan,darxumada ay la qabatimeen.Waxayna gali doonaan Nolo cusub iyo waa cusub.
Reply ↓	ugaas hagaa	July 30, 2012 • 20:30	wxn oo munafaqad iska daaya oo ilahay ka baqa walalayal aakhiraa kadanbasa isaaq iyo samaroon dhinackaa mari mayan hala toobad keeno dhaman tiina ilahay xaqa haydin garad siiyo qabiil waka somali halkaa dhigay ika ilaba qurux diinu wxy ku jirtaa walalnimada pro samatarna u duceeca wayo waa nin somli ah hana kara xilkaa ilahay ha u fududeeyee waslamu calaykum
Blog Stats	1,212,585 Booqasho - (Mahadsanid Mar Kale Nasoo Bariidi.!)